Gini mere na adighi ahia gi na Social? | Martech Zone
Gini mere na adighi ire ahia gi na Social?
Na ogbako a mere na nso nso a, anyi huru otu n’ime ndi ahia anyi ịkpachapu anya na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ahụ. Ha na-arụ ọrụ dị egwu ma na-enweta ezigbo ndu na agbanyeghị ndepụta ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ogbako ahụ. Mgbe Marty na ha kwurịtara okwu, ọ chọpụtara na ha enweghị ozi gbasara mmekọrịta ọ bụla maka ya iji jikọọ ndị ahịa na ntanetị. Mgbe ọ laghachiri, o dere azụmahịa ahụ iji mee ka ha mata na ha na-eme ihe n'eziokwu ma kwuo na ndị ahịa ha abụghị n'ezie na mmadụ.
Ga na-egwu egwu.
Ọ bụ ezie na LinkedIn nwere ike ịdị ka ọrụ, Facebook nwere ike ịdị ka ọ bụ maka ụmụ akwụkwọ kọleji na ọbụlagodi okwu ahụ tweeting nwere ike ịda ụda, ndị a bụ nnukwu nzukọ n'ịntanetị ị nwere ike ịchọta. Enwere ọtụtụ ijeri nke ndị mmadụ n'ịntanetị na narị otu narị na-achọ ngwaahịa na ọrụ gị kwa ụbọchị, na-arịọ maka ụlọ ọrụ gị, ma dị njikere itinye aka na ịntanetị Ọzọ karịa ka ha ga-anọghị n'ịntanetị.
Ndị otu ụlọ ọrụ na LinkedIn, ibe ụlọ ọrụ na Facebook, Tweetups, nnọkọ Twitter na hashtags na Twitter na-enye ohere dị egwu maka ndị ahịa gị na netwọkụ, wulite ntụkwasị obi ma chọta atụmanya n'ịntanetị. Gini mere n 'uwa i gha emefu puku kwuru puku dọla iji wulite ụlọ ntu ma ziga ndi otu ahia gi na ogbako… mana ileghara ndi mmadu anya? Nke ahụ bụ mkpụrụ osisi dị larịị n'oge a. Mkpụrụ.
Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji nweta ndị ahịa gị na Twitter:
Nwee amụma mgbasa ozi nọrọ ebe ma hụ na ndị nnọchi anya ahịa gị mara ihe na onye enyere ha ikike ma anaghị ekwe ka ha kwuo maka ịntanetị.
Mejupụta ya profaịlụ gị ma tinye ezigbo foto. I nwedịrị ike ịrịọ ụlọ ọrụ gị ka ha nwee peeji ọdịda ọdịda maka naanị onye na-ere ahịa gị!
search ụlọ ọrụ dị iche iche na LinkedIn. Soro ndi otu nwere otutu ndi otu nwere otutu oru. Tinye uru na mkparịta ụka ahụ.
Adịla ere! Wouldn't gaghị agakwuru mmadụ na ogbako ma nye ha ụbọchị ikpe 14… emela ya na mgbasa ozi. Kwesịrị ịnye uru ma wulite mmekọrịta na netwọkụ gị na-anọghị n'ịntanetị iji mechie azụmahịa na ọ nweghị ihe dị iche n'ịntanetị.
Zere esemokwu. Okpukpe, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọchị ọchị - ha niile nwere ike itinye gị na nsogbu n'ọfịs ma ọ nwere ike ịdaba gị na nsogbu na ntanetị. Na ntanetị na-adịgide adịgide!
Emela ọjọọ asọmpi ahụ. Ọ bụ enweghị uto na ga-eri gị azụmahịa. O nwedịrị ike imechu gị ihu dịka ndị ahịa na ndị ahịa ha nwere obi ụtọ na-abịa enyemaka ha wee malite ibute gị.
Nye support. O zughi iji zipu ndị mmadụ na peeji nke ozi ndị ahịa gị. Iwere ibu ọrụ nke onwe gị iji hụ na edozi nsogbu nke ọma ma debe onye ahịa nwere obi ụtọ ga-enye netwọkụ ahụ nnukwu mmetụta banyere gị yana otu ị siri echebara ndị ahịa gị echiche.
Emela naanị jikọọ na atụmanya. Soro asọmpi gị ka ị nwee ike ịmụtakwu banyere ha, atụmatụ ha na obodo ha. Soro ndị isi ụlọ ọrụ echebere echiche nwere ike inye aka webata gị na netwọkụ gị. Soro ndị ahịa gị ma kwalite ọrụ ha. Soro atụmanya mara ha.
Ọ bụrụ n ’usoro ịre ahịa gị bụ ichere maka ụzọ inbound, pịa site na ndepụta ndị na - edugharị, ma chere maka ọgbakọ na - esote iji chịkọta kaadị azụmaahịa, ị na - egbochi oke ohere gị ịre ebe ịchọrọ. Ihe ị na-achọ maka ngwaahịa na ọrụ gị dị n'ịntanetị ugbu a. Mkparịta ụka ahụ na - eme ma ọ bụ na - enweghị gị… ma ọ bụ ka njọ - yana ndị asọmpi gị. Ikwesiri idi na mkparita uka ndia. Kwesịrị ịnweta ahịa ndị ahụ.
Tags: edu ọgbọeduNkwado ire ahịaelekọta mmadụ mediaịkparịta ụka n'socialntanet